बाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरे कर्जा र निक्षेपको नयाँ ब्याजदर कुन बैंकको कति व्याजदर ?
समभाव मंगलबार, असार १, २०७८
काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । नयाँ ब्याजदरमा यसअघिको भन्दा सामान्य हेरफेर गरिएको बैंकहरुले जनाएका छन् । नयाँ व्यजदर आज मंगलबारदेखि लागू हुने बैंकहरुले बताएका छन् ।
कुन बैंकको कति व्याजदर ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १, २०७८, १४:२६:००